Muuqaal: RW. Khayre oo Dhalinyarada Uga Farxiyey iyo 1000-Qof oo Shaqaale Laga dhigayo oo la shaaciyey - Hablaha Media Network
Muuqaal: RW. Khayre oo Dhalinyarada Uga Farxiyey iyo 1000-Qof oo Shaqaale Laga dhigayo oo la shaaciyey
HMN:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir ay shaqaaleysiiyaan ku dhawaad 1000 qof oo ka mid ah dhalinyaradda Soomaaliyeed ee kunool Magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay in maanta Xafiiskiisa ay kasoo bixin doono Warqad lagu Amraayo gudoomiye Taabid in uu qabto Shaqadaasi.
Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan ay ku bixin doonto shaqaaleysiinta dhalinyaradda Soomaaliyeed meelwalba oo ay jooggaan.
Xasan Cali Kheyre ayaa tilmaamay in sidoo kale dowlad goboleedyadda lagu Amri doono in ay shaqaaleysiiyaan dhalinyaradda Soomaaliyeed.